Ufuna ubulungiswa otalajwe esiteshini samaphoyisa | News24
Ufuna ubulungiswa otalajwe esiteshini samaphoyisa
isithombe: lethiwe makhanyaIzandla zikaMnuz Sphelele Ntombela ezilimele emva kokukhulekwa ngozankosi.
“Bengizitshela ukuthi bazongibulala ngendlela abangishaye ngayo.”
Lawa ngamazwi kaMnuz Sphelele Ntombela (23) waseMagwababeni eMpophomeni osola amaphoyisa asesiteshini samaphoyisa saseMpophomeni ngokumenzela phansi ngesikhathi ethi uyovula icala emva kokushaywa kanzima iphoyisa nabanye abalisa ababili.
Lesi sigameko senzeke mhla ziyi-8 kuNhlaba (May) nonyaka.
UMnuz Ntombela uthi ubesolwa ngokuthi untshontshe imali kamakhelwane yingakho bamutalabha
Elandisa i-Echo uthe wayehleli ekhaya ngesikhathi kufika umfana wakwamakhelwane ehamba nomunye wesilisa bethi bazolanda u-R2000 awuntshontshe esisefweni esihlala imali kamakhelwane.
Uthe bafika bamuthatha kubo ngenkani bangamutshela ukuthi bamusaphi.
“Endleleni sahlangana nephoyisa elisebenza esiteshini samaphoyisa sase-Howick elingumfowabo kamakhelwane lo owayengisola ngokuntshontsha. Leli phoyisa lathi angithathwe ngiyiswe esiteshini samaphoyisa eMpophomeni ukuze ngizovulelwa icala. Sathi uma sifika esiteshini abazange bakhulume ngisho namaphoyisa lawa aba ngaphambili uma uvula icala esiteshini, kodwa badlula nami baya kwezinye izindlu engicabanga ukuthi zihlala abaseshi. Bafika bangifaka ozankosi ezandleni nasezinyaweni banginsinya ngabo kangangokuba ngangingakwazi ngisho ukunyakaza. Emva kwalokho bangihlalisa kwenye insimbi nayo eyayingivimba ukuthi nginyakaze base bengishaya. Baqala bangishaya ngezimpama nangayo yonke into eyayiseduze kwabo. Baze bangifaka ngisho u-plastic ekhanda bangigwilizisa nasemanzini bethi angivume ukuthi ngiyintshontshile imali yabo. Bengizitshela ukuthi ngizoshona ngoba besengiphuma igazi ngamakhala nangomlomo kodwa lokho akuzange kubanqande ekutheni baqhubeke bengishaye,” kuchaza yena.
Uqhube wathi wagcina ngokuthi avume ukuthi uyena oyithathile imali ngoba efuna ukuthi bamudedele abuyele ekhaya.
“Ngase ngizwa ukuthi umoya uyaphuma ngizoshona ngavuma ukuthi ngiyithathile imali futhi ngizoyikhokha. Base bangiqaqa sahamba saya ekhaya kodwa iphoyisa lasala ngemuva esiteshini samaphoyisa labe selinikeza umfowabo abebengishaya naye ozankosi ukuthi masifika ekhaya baphinde baqhubeke bangibophe bangishaye.
“Safika endlini baqhubeka lapho begcine khona bangigwilizisa ebhavini ogcwele amanzi. Ngabatshela ukuthi anginayo imali bathi angifune umuntu ozongiboleka ngoba ngeke baze bayeke ukungishaya. Ngamemeza umama wasendaweni engimujwayele nowafika ngokukhulu ukushesha kwaba ukuphunyuka kwami. Wabatshela ukuthi uzobakhokhela imali yabo bese mina ngikhokhela yena ngoba vele ngiyasebenza.”
Uthe ngosuku olulandelayo wahlala embhedeni usuku lonke engakwazi kunyakaza ngenxa yokulimala kanti namehlo akhe ayevalekile engaboni.
Uthe ngoLwesine mhla zili-10 kuNhlaba (May) wavukela esiteshini samaphoyisa sakuyona lendawo ethi uyovula icala kodwa abazange bamusize.
“Abazange bafune ngisho ukuzwa ukuthi kwenzekeni bavele banginikeza ifomu elibizwa nge-J88 bathi angihambe nalo ngiye esibhedlela. Ngaya esibhedlela i-Northdale ngosuku olufanayo ngabonwa udokotela wathatha nezithombe zokulimala kwami.
“Inkinga enginayo manje ukuthi amaphoyisa awafuni ukungivulela icala kanti nodokotela ufuna inamba ekuvulwe ngayo icala ukuze ezogcwalisa ifomu. Angisazi ukuthi ngenzenjani manje ukuze ngikwazi ukuvula icala ngoba labantu ngibafuna beboshiwe.Bangithathela ngisho umakhalekhukhwini wami,” kuphetha yena.
Okhulumela amaphoyisa esiteshini saseMpophomeni u-Warrant Officer Mkhize uthe bebengazi ukuthi uMnuz Ntombela washayelwa esiteshini waphinda waphika nokuthi amaphoyisa azange avume ukumvulela icala.
“Wanikezwa ifomu elibizwa nge-J88 ukuthi alihambise esibhedlela ukuze udokotela ezoligcwalisa bese alibuyisela kuthina sizovula icala. Imininingwane yaleli fomu iyasisiza ukwazi ukuthi hlobo luni lwecala esizolivula. Kumele alibuyise ukuze sizovula icala bese kwenziwa uphenyo,” kubeka yena.